kpochara nickel ụlọ ịsa ahụ na-ekpo ọkụ 2 ejiri aka
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW athlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie na-agba nchara nchara
WOWOW Bathroom Sink Faucet Naa Nickel Gbasara Anya
gosiri 4.94 nke 5 dabeere na 18 ahịa Fim
(18 ahịa reviews)
Ntụziaka nwụnye 2321300
Roomlọ ịsa ahụ Maka ụlọ ịsa ahụ Felet Nickel 2321300
Mgbapụta mmịpụta emelitere dị mfe maka ịtọlite ​​ma jiri ya karịa usoro igbapu mmiri.
Okike ngwa ngwa jikọọ teknụzụ -oriri ihe okike ngwa ngwa njikọ dị mfe iji wụnye na onwe gị na enweghị plọmba! Ichekwa ọkpọkọ echichi ụgwọ na osisi foset!
3-oghere mgbodo na 4-16-anụ ọhịa juru ebe niile layout - maka mfe echichi.
Freut faucet brushed nickel end: 2 ijikwa faucet brushed nickel layout style kpochapụwo retro. Mbelata akara ukwu, guzogide corrosion. Ckgbọ mmiri gbakwụnyere ebugharị fọdụụrụ ụlọ a na-anakwere, mgbazinye ụlọ ọhụụ, otu ụlọ, ụgbọala na-adọkpụ, njem ụlọ, na ojiji ụlọ.
Faucet kachasị mma na nkwa afọ 3: abs onye nrụpụta na-echekwa mmiri 50% na mgbochi mgbochi, nke a na-ewepụ n'ọbụ aka gị iji saa aka (enweghị ngwaọrụ chọrọ). Igwe eji akwa seramiiki na-enweghị ihe ịga nke ọma.
SKU: 2321300 Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: igwe na-agwakọta, oghere lavatory atọ, Gburugburu ebe niile
12.1 x 8.6 x 3.1 sentimita
3-oghere; ọkpọkọ mmiri juru ebe niile
5.1 sentimita asatọ
Ihe eji aka abuo
Mgbasa zuru ebe niile: 8-16 inch
Obosara foset * 1, Nwụnye nkọwapụta * 1, Gbapụta igbapu * 1
Nke a bụ a mma na-achọ foset. Ọ gara na mfe (jiri ntuziaka) wee na hoses na pop.up igbapu. Nke a bụ mbido izizi m nwere. Chee na m ga-amasị ya. Ikekwe ọ gaghị anakọta ọtụtụ ntutu ma hichaa ya. Ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole ka ị nweghị ike ikwu okwu gbasara ogologo ndụ. M ga-enye ya ọzọ.
Ezi ntuziaka na ezigbo ntuziaka doro anya. Arụnyere nke ọma. Ọnụ ego dị ukwuu maka ọkpọkọ mmiri zuru ebe niile. Obi dị m ụtọ na m gbalịrị ya, agaghị m ala azụ ịhazigharị m mgbe m chọrọ ọzọ. The rose bụ a mma aka
A *** a2020-04-19
Ihe dị mfe nke nwụnye, were ihe dị ka 15 - 20 nkeji iji wụnye. Enyocha maka Mee N'onwe Gị na m fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 70 were ogologo oge gbagọrọ agbada n'okpuru ihe efu ma weghachite karịa ịwụnye. Mgbe wụnye anwale na ọ dịghị ntapu ke igbapu ma ọ bụ ndepụta. Ngwaahịa masịrị ya nke ukwuu. Emere m ihe ndozi griiz ọ bụ ezie n'ihi eziokwu ahụ o were ụbọchị abụọ iji wepụ pipụ ochie n'ihi njikọ niile oyi na-atụ na-egbutu ọkpọkọ ochie. Ọnụahịa bụkwa ihe dị ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa maka ngwaahịa ngwaahịa. Dị mfe iji wụnye adịghịdị mkpa ntuziaka ndị ahụ enyere.
A na-ebute ma na-etinye ọkpọ mmiri taa. Ngwurugwu dị mma, ihe dị ka ọkara ọnụahịa Delta ma ọ bụ Ahịa Pfister kwekọrọ na nnukwu ụlọ ahịa. Amaghi otu ha ga esi jigide ogologo oge mana ha nwere ezigbo mmetụta siri ike na ntinye siri kwụ ọtọ. Gbapụta drain bụ ezigbo mma na ọnụahịa a. Ibelata otu kpakpando n'ihi na kposara abụọ ejiri mee ka eriri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi na-atụsi ike na-efu. M arụnyere na-eji nanị gụnyere aku ma kposara dị oké egwu ka kpọchie ala ahụ na ha abụghị na ngwugwu.
Ọ bụ ọnụ, mere na China na ntụziaka adabaghị na ọkpọkọ mmiri ma ... WOW !! O juru m anya na njirimara nke ihe ndị ahụ ma nwee ike ịwụnye ya bụ ihe ijuanya nke ukwuu. Ọ dochiri ọnụahịa Pfister dị oke ọnụ nke mechara bụrụ ihe anaghị arụ ọrụ n'ime afọ ole na ole. O were m awa 5.5 iji wepu Pfister ka ewepu ya n'ihi ọkwa nke nchara na nchara - n'ezie aghaghị ime ka onye na-asacha ihe dị n'elu site na mmiri ọkụ na-adaba ya site na nkwụsị nke mmiri iji wepụ ya. Wụnye ọhụụ ọhụrụ WOWOW were m ihe na-erughị elekere 1, enweghị nkwụsị, ihe ịtụnanya! Zụrụ ya! Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị naanị otu afọ ma ọ bụ abụọ (nke m ga-atụ anya na ọ ga-adịru ogologo oge ọbụlagodi na mmiri siri ike AZ), onye na-eche? Na ọnụahịa a, zụrụ ọzọ wee tụfuo ya n’oge na-adịghị anya. M ga-kpam kpam, ghaghị ịzụta ihe a ọzọ!
Enwere m obi abụọ m mgbe m nyere iwu ahụ. Ha mara ezigbo mma, mana ịbụ ndị na-apụ apụ, adị m njikere ịlaghachi ha ma ọ bụrụ na ha adịghị mma. Ma ha na-ele anya nke ọma site na igbe ahụ, ọ dị mfe ịwụnye ma rụọ ọrụ zuru oke! Aga m eme ka ị mara ma nke ahụ gbanwere, mana ruo ugbu a, anaghị m akwa ụta maka ịzụta ha, azụrụ m ụdị 2 maka ihe efu abụọ!
Agaghị arụnyere ọkpọkọ a maka izu abụọ ọzọ mgbe nrụzigharị ahụ malitere. N'agbanyeghị, m nwere ike maa-agwa gị na n'ozuzu anya nke a ọkpọkọ mmiri na-ada n'ezie n'ezie na atọ isi iberibe nọ na iche iche akwa akpa. Ekwenyesiri m ike na nke a bụ ihe ịrịba ama nke ogo ngwaahịa a.
Karịrị m karịa ka m tụrụ anya na ọ ga-adị. Na-ele anya nke ukwuu na ihe efu ọhụrụ anyị. Super mfe wụnye, niile mkpa akụkụ wee na foset. Achọpụtara nke yiri nke ahụ n'ụlọ ahịa dị na mpaghara anyị mana ọ bụ ugboro atọ ọnụ ahịa nke otu a. Ga-azụta ọzọ.
Ejiri ọtụtụ ihe ọhụrụ mee ka ụlọ mposi m dị ọhụrụ. Nke a foset bụ kpọmkwem ihe m chọrọ ma bụ ụzọ overpriced na nnukwu igbe na-echekwa. Ọ fọrọ nke nta ka m dozie maka ihe m na-ahụghị n'anya ruo mgbe m hụrụ nke a. Ugbu a, obi dị m ezigbo ụtọ.
Abụ m onye ọrụ ngo ga-ekwukwa na ndị a bụ ezigbo ezigbo mma maka ọnụahịa ahụ. Mfe iji wụnye ma mee nke ọma ma tinye ya. Otu foset na nnukwu ụlọ ahịa na-echekwa okpukpu abụọ.
E *** u2020-05-06
Enwere m mmasị n'ile anya nke ọkpọkọ mmiri a. M zụtara ihe efu ọhụrụ n'oge na-adịghị anya na nke a dị oke mma. Ekwadoro m na enwere m obi ụtọ na ngwaahịa a.
M *** s2020-05-07
Igwe ọkpọ ndị a bụ naanị ihe dị anyị mkpa iji melite ụlọ ịsa ahụ anyị. Ezigbo imewe & ogo dị mma ọnụahịa & nnyefe ọsọ ọsọ.
Awụnyere 2 n'ime ụlọ ịsa ahụ
Igwe mmiri na-eme nke ọma na ntinye nke ukwuu. Ntụziaka zuru oke ha egosighi ihe ntinye igwe ahụ bụ eriri ọkọlọtọ mba. Ọ ga-adị mfe ịrụzi ma ọ bụ dochie anya n'ihi ụzọ e si enweta pọmpụ ahụ ọ ga-ekwe omume iwepụ ya na onye ọkwọ ụgbọ ala na mkpịsị aka gị. Nnukwu imewe
M arụnyere banyere bụla emeputa nke foset na-efu 3-4 oge na-eri nke a onye- nwere àgwà ma ọ bụrụ na dị ka ihe ọma ma ọ bụ mma- mfe awụnyere na nnọọ obi ụtọ na purchasezụ
Ezigbo uru. Ọdịdị mara mma dị oke ọcha na ngwaahịa dị elu. Ọ masịrị onye ọrụ m nke ukwuu. Ihe kacha mma maka ya maka m bụ aka igbapu stopa - enweghị plunger imebi!
Nke a bụ ezigbo ọkpọkọ mara mma, yana nnukwu ego. Onye plọmba ahụ jụrụ m ebe m nwetara ya n'ihi na ọ chọrọ ịzụ ụfọdụ.
Zingtụnanya ọkpọkọ na n'otu n'otu ọbọp ke ha onwe ha ákwà akpa ka ha wee ghara ọkọ - ọ bụrụ na onye wụnye ya m na ọ hụrụ na ọ dị nnọọ mfe na ntuziaka ndị doro anya - jụrụ ma ọ bụrụ na ha nwere mmiri ịsa ahụ ọkpọkọ ka dakọtara n'ihi na m ga-ịtụ otu!
Ihe ọkpọ mmiri dị mma ma ha dị oke mma. Wụnye gara nke ọma n'enweghị nsogbu. Naanị ihe ga-amasị m bụ ahịrị mmiri ga-esikwu ike. Kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-ejikọta eriri mmiri.